Umhlahlandlela We-Ultimate To Tipping eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Umhlahlandlela We-Ultimate To Tipping eYurophu
Emhlabeni wonke, Ukunikeza inomphumela nemikhuba ehluke kakhulu, Ngokwesibonelo: Ukuthola izeluleko eSouth Africa kuyadingeka, njengoba kunjalo USA. Kulindeleke ukuthi ushiye ithiphu phakathi 15 futhi 25% eMelika, futhi uma ungaphenduki ungaxoshwa kakhulu ngumlindi onolaka. Kepha kuthiwani ngeYurophu? Izikweletu eziningi eYurophu zizohlanganiswa nezeluleko, Nokho, lokhu kuyahluka kuye emazweni. Ukwazi izindlela ezithile zokunikeza usizo ezweni lakho lokuya kuyogwema ukudideka nemizwa engemihle engase ibe khona. Ngakho-ke funda ukuthola umhlahlandlela wokugcina wokuthola usizo eYurophu!
Ultimate Umhlahlandlela To Tipping eYurophu By Service
Ukunikeza usizo eYurophu kuvame ukuhluka kuye ngohlobo lwensizakalo oyitholayo. Ngokwesibonelo, kulindeleke ukuthi ukhiphe isilinda endaweni yokudlela enezinkanyezi ezinhlanu ngesisekelo ehlukile kuseva ngemuva kwekhawunta. AbakwaBartenders bebengeke balindele ukuthi bazothola ithiphu nakancane kwezinye izikhathi, lapho abashayeli bamatekisi bebezokwenza. Kusebenzisa ukuqonda kwakho, futhi ukuphana kuhlale kuyindlela enhle yokuhamba lapho unquma ngethiphu elifanele. Futhi, izindawo eziningi zidinga ukuthi ukhiphe ukheshi, ngakho-ke qiniseka ukuthi uphatha amanothi ambalwa we-Euro kuwe ngaso sonke isikhathi.
Ukusikisela Sitolo sekudla lokuphekiwe
Noma yisiphi isimo lapho ukudla noma iziphuzo zilethwa khona etafuleni kuvame ukudinga ithiphu. Inani lincike ohlotsheni lokudlela olujabulelayo. Inqubo ejwayelekile yokufaka imali eYurophu ukushiya izikweletu ezingama-Euro amabili noma amabili ngaphezulu kwenani lesibambiso uma kuyiziphuzo eziyisiyingi kodwa kungabikho ukudla oku-odwayo. Ukudla okugcwele endaweni ehlala phansi kuhlukile. Esimweni esinjalo, ama-euro ambalwa ngomuntu ngamunye ngokuvamile anele. Izindawo zokudlela ezinenkanyezi ezinhlanu kulo lonke elaseYurophu zivame ukufaka ithiphu ebhili yazo. Qiniseka ukuthi ubheka lokhu njengoba asikho isidingo sokushiya enye ithiphu ngaphandle kokuthi uyijabulele insiza yakho. Insizakalo enhle kwesinye isikhathi idinga enye iphuzu, ngakho-ke kulezi zimo, ungahle uhambe yonke indlela kuze kufike 15%.
Ama-Pubs amaningi noma imigoqo ezwekazini lonke alindeli izeluleko nhlobo. AbakwaBartenders bakhokhelwa iholo, futhi ngenkathi izinhlamvu zemali ezimbalwa ku-jar jar zingatholwa kakhulu, akudingekile. uma wenza ithiphu, uphinde ukhumbule ukusebenzisa ukheshi kuphela, kungaba amanothi noma izinhlamvu zemali. Uma kwenzeka uphela ekugcineni nansi uhlu 5 Izindawo Nge Phila Umculo EYurophu.
Ama-Stylists kanye ne-Spa's
Abantu abaningi bafuna ukuthola i-hairdo entsha entsha, noma ukubhucungwa umzimba ngenkathi ngiseholidini. Ngenhlanhla uzothola ama-spas nama-stylists kulo lonke elaseYurophu, imvamisa cishe kuwo wonke amadolobha. Ukululeka, kunoma yikuphi, imvamisa cishe amaphesenti ayishumi. Uma ujabule kakhulu ngenkonzo oyitholile, ungahle uye phezulu njengoba 15%.
Amahhotela ngumbuzo ojwayelekile uma kuziwa embuzweni wokufaka i-Europe. Njengomthetho wesithupha, umuntu kufanele alandele njalo umhlahlandlela we-One Euro. Lokhu ngokuyisisekelo kusho ukuthi ushiya i-Euro eyodwa kumathiphu wenkonzo ngayinye. Uma i-bellhop noma i-porter ithwala izikhwama zakho, khona-ke i-Euro eyodwa isikhwama ngasinye yanele. Ukuhlanza indlu kufanele kuthole i-Euro ngosuku. Ukululeka i-concierge yakho kungokuthanda kwakho, kepha kufanele kuncike ezingeni lenkonzo oyitholile. Uma badlulele ngaphezulu nangaphezulu ukuze ungahlala ukhumbuleka futhi ujabulise, khona-ke ithiphu lama-euro ayisihlanu kuya kwayishumi noma ngisho nangaphezulu kufanelekile.
Yini To Tip Amatekisi Nezokuthutha
Ama-Taxi kanye ne-Ubers ayingxenye yangaphakathi yokujikeleza iYurophu. Lapho ukhetha ukuthi uzokwengeza ini, kungcono ukukhumbula ukuthi umshayeli ukhokhelwa kanjani. ngokuvamile, Nokho, ithiphu emibili ye-Euro ngetekisi elifushane noma ukugibela i-Uber kufanelekile. Izinhlelo zokusebenza ezinjenge-Uber zikuvumela ukuthi uciphise umshayeli ngogesi, ngenkathi amatekisi e-metered azodinga imali. Ukunikeza usizo eYurophu ngenkathi usohambweni kuyafana nokuthola izikhala noma ezindaweni zokudlela. Khumbula ukuthi akudingeki ngaso sonke isikhathi, kepha kuvame ukwaziswa. Ukubhuka amathikithi akho wesitimela yakho uhambo European ilula futhi kulula nge I-Cheapest Train Tickets Website Emhlabeni.
Ultimate Umhlahlandlela To Tipping eYurophu Ngezwe
Amazwe amaningi alandela imihlahlandlela efanayo ejwayelekile uma kuziwa ekuphawuleni eYurophu. Kunjalo, kufanele njalo cwaninga indawo okuhlosiwe ngaphambi kokuhamba ukuze uqiniseke ukuthi usesikhathini ngokugcwele. Izincwajana zemininingwane travel kungakuhambisa emazweni amaningana ngasikhathi sinye, ngakho-ke ukuqiniseka ngqo ukuthi yini okufanele uyenze kulowo nalowo kuyasiza njalo. Amanye amazwe ahlukile kubalingani bawo ngokwemithetho, Nokho.
I-Iceland Ne Scandinavia
Ukuthi kungubuyisele emuva kwimvelaphi yabo yamaViking noma nje ukulula okulula, la mazwe akuthandayo ukuthi ungafiki nakancane. Izindawo zokudlela eziningi kanye nezinsizakalo zizoba nethiphu efakiwe kumbhili. Kusafanelekile ukuzungeza umthethosivivinywa uze ufike kwi-Euro eseduze kunethiphu noma ngekheshi noma ngekhadi lesikweletu.
AmaGrikhi enza konke ngokwehlukile, futhi ukusikisela akukho lutho. Izikweletu ezinkulu zidinga amathiphu amancane futhi izikweletu ezincane zidinga amathiphu amakhulu.
Shiya okungenani a 5% ithiphu, ukheshi ngamaseva, noma ngabe umthethosivivinywa uhlanganisa nesibonelelo. ICash ihlala iyinkosi emazweni amaningi aseYurophu, ne-Austria akuhlukile.
Yini Ongakunika Ithiphu E-Ireland NaseScotland
Baziwa ngobungani babo, zombili lezi zizwe zizophatha izikhwama zakho ngenjabulo. Ukuthola izeluleko kubathwali bemithwalo akubalulekile, futhi imvamisa akulindelekile. Ukuba nomusa bese uthi ngiyabonga ngenhlonipho, Nokho, kulindeleke. Uma ufisa ukuthola insizakalo efanayo ngokuzayo kusuka kumgcini wakho wezindlu, qiniseka ukubazisa kahle.
Ongakunikeza Ithiphu EYurophu – Britain
Abantu abaningi baseBrithani baye bazama ukucacisela izivakashi ukuthi ukufaka isandla ekugcineni akusikho isidingo sokwenza lokho. Uma kukhulunywa ngokuthola isipikili eYurophu, lokhu kungenye yemithetho eqinile. Ungashiyi ithiphu egumbini lakho lehhotela, izonikezwa ngaphambili edeskini elingaphambili njengoba elahlekile imali. Ama-Bartenders nawo awalindele izeluleko, nokuzidonsa kungadideka. Ngazo zonke izindlela, yiba nobungane futhi wamukele umlingani wakho wokuqala. Faka izinhlamvu zemali ezimbalwa embizeni yethiphu uma ikhona. Uma kungenjalo, kunalokho shiya ithiphu ngaphandle kwe-equation.
Ukujikeleza Yonke imininingwane Ngokuphathelene Ngokuthola Izeluleko eYurophu
Iseluleko esihle kakhulu sokuthola usizo eYurophu ukwenza umsebenzi wesikole. Funda konke mayelana nezwe, noma amazwe ohlela ukuwavakashela. khumbula lokho uhambo lwesitimela luvame ukukuthatha emazweni amaningi ukuze ukwazi ukuma lapho. Letha njalo ukheshi, zombili izinhlamvu zemali, namanothi ambalwa okufaka imali. Uma ungaqiniseki ngezinqubomgomo, Namathela emthethweni wamaphesenti ayishumi zokudlela, kanye nomthetho owodwa we-Euro wakho konke okunye.
Khumbula, Siyathanda ukukufundisa mayelana nokuHamba, ngakho-ke lapho isikhathi sesilungile futhi unquma ukuhamba, khumbula ukuthi iTravel Travel iyindlela yethu ekhethekile futhi ekhethiwe Londoloza Isitimela, singathanda ukukusiza ukuba ujabulele uhambo lwakho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Umhlahlandlela We-Ultimate To Tipping eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-tipping-europe/?lang=zu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#yokudlela europetravel Ukudla I-TippingEurope Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips Amaholide